सरकार सच्चिने कि ? | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय सरकार सच्चिने कि ?
on: January 08, 2019 सम्पादकीय
सरकार सच्चिने कि ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्र निकै सकारात्मक बाटोमा अघि बढिरहेको भनी झूटो तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई प्रश्न सोध्न सभामुखले दिएनन् किनभने प्रधानमन्त्रीले समय दिनुभएन । संसद्मा दिएको वक्तव्यमा भ्रमपूर्ण तथ्यांक प्रस्तुत गरेको भनी सबैले आलोचना गरे पनि प्रमले त्यसको बचाउ गरिरहनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उहाँको बचाउमा केही तथ्यांकलाई पुष्टि गर्दै सोमवार स्पष्टीकरण दिए पनि अरू भ्रामक भनिएका तथ्यांकबारे केही बोल्न सकेको छैन । यतिमात्र होइन, यसअघिका उहाँका धेरै क्रियाकलाप र भनाइ गैरजिम्मेवार र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भए पनि त्यसलाई सुधार्न उहाँले चासो दिएको पाइँदैन । बरु त्यही बाटोमा झन् अगाडि बढ्न खोजेको प्रतीत हुन्छ ।
सांसदका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्नुलाई राजनीतिक प्रणालीमाथिको आक्रमण भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा धम्कीपूर्ण भाषा बोल्नु लोकतन्त्रका लागि निकै खतरा हो । प्रतिपक्षले मेरो पछि लाग्नुको विकल्प छैन भन्ने आशयको प्रधानमन्त्रीको धम्कीपूर्ण चेतावनी झनै आपत्तिजनक छ ।
शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन लोकतन्त्रको प्राण हो । केही विशेष अधिकार बाहेक राज्यका अंगले एकअर्काको निरीक्षण र समीक्षा गर्न पाउँछन्, गर्छन् पनि । संसद्को विशेष अधिकारमा न्यायालय बोल्दैन, न्यायालयको काममा संसद्ले हस्तक्षेप गर्दैन । लोकतन्त्रको प्रणाली यही हो, आत्मा यही हो । तर, दुई तिहाइ बहुमतको नेकपाको सरकारले यो मर्मविपरीत काम गरेको छ । चाहे रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउन सभामुखलाई दिएको निर्देशनको सन्दर्भ होस् अथवा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति । यी सबैले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको अवमूल्यन गर्न थालेको संकेत गर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर झूटो बोल्नुभयो । यसअघि वाइडबडी प्रकरणमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले संसदीय उपसमितिमा झूटो बोले । यसरी संसद्मा झूटो बोल्नुलाई संसदीय प्रणाली भएका सबै देशमा अक्षम्य मानिन्छ । रेशम चौधरीको शपथका विषयमा सभामुखले ‘प्रधानमन्त्रीले भनेको मैले कसरी नमान्नू’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकाले संसद्लाई कार्यकारी अंगको अधीन बनाउन खोजिएको संकेत गर्छ । प्रतिपक्षको मागलाई उपेक्षा गरेर संसद्को कारबाही अगाडि बढाउनु पनि गलत नै हो ।
अझ सांसदका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्नुलाई राजनीतिक प्रणालीमाथिको आक्रमण भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा धम्कीपूर्ण भाषा बोल्नु लोकतन्त्रका लागि निकै खतरा हो । प्रतिपक्षले मेरो पछि लाग्नुको विकल्प छैन भन्ने आशयको प्रधानमन्त्रीको धम्कीपूर्ण चेतावनी झनै आपत्तिजनक छ । प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएका कतिपय तथ्यांक गलत भए भन्नेमा मात्र आपत्ति होइन, कतिपय तथ्य नै भए पनि प्रस्तुतिमा चाहिँ पूरै तोडमोड गरिएको छ । त्यसमा प्रश्न उठाउँदा उल्टै प्रतिवाद गर्नुचाहिँ स्वागतयोग्य हुँदैन ।
लोकतन्त्र जनतालाई सर्वोच्च मान्ने व्यवस्था हो । जनतालाई भेडाबाख्रा ठान्ने मानसिकता अधिनायकवादमा मात्र हुन्छ । जनता र संसद्लाई ढाँट्नु, गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेर अलमल्याउन खोज्नु र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एवम् प्रतिपक्षलाई अवमूल्यन गर्नु र धम्की दिनु लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र मर्म विपरीत अधिनायकवादमा मात्र सुहाउने बोलीवचन र व्यवहारलाई अधिनायकवादी मानसिकताको प्रतिविम्ब मानिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई यो दिशातिर अभिमुख नराएकै राम्रो हुनेछ । देशका लागि पनि र स्वयं उहाँलाई पनि ।
मन्त्रीको कामप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
अभियान जनमत : ओली सरकारको कामभन्दा कुरा बढी
प्रधानमन्त्रीकै निगरानीमा रहेका ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक